Shirweynihii Dallada SSE-da oo si rasmiya uga furmay magaalada Helsinki ee dalka Findland(SATURDAY - 26/April/2014)
Shirweynihii dallada xidhiidhisa Jaalliyadaha Somaliland ee Qaarada Yurub ayaa si rasmiya uga furmay magaalada Helsinki ee dalka Findland maallinta Jimcaha ee 25ka April 2014. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay in badan oo ka mid ah qurbo jooga dalalka Yurub oo ay ka mid yihiin Findland, Holland, UK, Sweden, Denmark, France, Italy, Norway, Germany, USA, Somaliland iyo waddamo kaleba.
Waxa kulanka lagu casuumay khabiiro ka socdey Somaliland iyo kuwa ajaanib ahba. Barnaamijka kulanka ayaa loogu talo galay labo maalmood oo ah 25ka iyo 26ka April. Mawaadiicda loogu talo galay in lagaga doodo maalinta hore ayaa waxa ka mid ahaa:
In laga hadlo arrimaha aqoonsi raadiska Somaliland, doorka dhaqanka iyo saameynta uu ku yeelanayo arrimaha horumarka, doorka ama kaallinta dhallinyarada iyo haweenka Somaliland. Sidoo kale waxa lagaga hadlay nidaamka dimuqraadiyada Somaliland iyo qaabka lagu xoojin karo. Taxanaha kulanka waxaa wada guddoominayay Abdiraxman Abdullahi Jibril iyo Dr. Marja Tiilikainen.
Kulanka ayaa waxa kalmada soo dhoweynta bixiyey guddoomiyaha jaaliyada Somaliland ee Findland (Somaliland Seura) . Hassan Abdi Ali, Ka dibna waxa lagu soo dhoweeyay guddoomiyaha dallada SSE (Abdourahman Yassin) oo si rasmiya u furay kulanka isla markaana mahadnaq balaadhan u soo jeediyay dhammaan dadkii shaqada geliyay diyaarinta kulanka. Sidoo kale waxa uu guddomiyuhu ka hadlay ujeeddada kulanka iyo natiijooyinka laga rajaynayo in laga gaadho. Waxa sidoo kale kalmado soo dhoweyn ah goobta ka soo jeediyaya guddoomiyaha UCID (Faysal Cali Waraabe) oo isna kulanka lagu casuumay isla markaana ka hadlay muhimada iyo faa’iidada ku jirta kulanada noocan oo kale, waxaanu qurbo jooga ku booriyay inay kaalintooda si firfircooni ku jirto ay u soo bandhigaan iyaga oo ka faa.iideysanaya fursadaha ay haystaan. Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliland Cabdiraxman Maxamed Cabdullahi oo kulanka qaybtii dambe ka soo gaadhay ayaa isaga laftiisu uu si kooban uga hadlay midhaha iyo faa,iidada ku jirta kulanka iyo inay fursad u tahay labada dhinacba haddii ay tahay waddanka ama haddii ay tahay qurbaha. Sidoo kale waxa uu Dallada SSE ku amaanay xamilka ay u yeesheen inay mudo 14 sano wadeen wada shaqeynta ururada reer Somaliland ee Yurub taasina ay keentay in meelo badan oo kala duwan lagu kulmo si loo xoojiyo wada shaqeynta iyo iska warheynta.
Intii aan loo gudo gelin khudbadaha ayaa waxa sidoo kale goobta ka hadlay marwo Liisa Jaakkonsaari oo ah xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Yurub isla markaana haddalo hordhac u ah kulanka goobta ka soo jeedisay.
Xildhibaanadu waxay tilmaantay ahmiyada dallada noocan oo kale ah oo aan u adeegeyn danta Somaliland oo keliya, balse sidoo kale ka shaqeynaysa sidoo qurbo jooga Somaliland ee Yurub ay u dhex geli lahaayeen bulshada reer Yurub ee ay la noolyihiin. Waxay xildhibaanadu ku nuuxnuuxsatay in aan la dhayalsan doorka ama kaalinta wax-ku-oolka ah ee ay dalladani ciyaari karto.
Kalmadahaa hordhaca ka dib ayaa waxa mawduucii furaha u ahaa maalinta koowaad ayaa waxa si faahfaahsan goobta uga soo jeediyay prof. Prof. Ahmed I. Samatar oo ah hormoodka mac-hadka Global Citizenship isla markaana ah macallin ama bare sare oo ah culuunta caalamiga (international Studies). Axmed waxa uu ka hadlay arrimaha qaddiyada ictiraafka Somaliland. Waxyaabaha ay Somaliland u ordeyso iyo waxyaabaha ay ka ordeyso ayuu aad uga hadlay. Faraqa u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ayuu sidoo kale ka doodey iyada oo dhinacyo badan uu ka eegay. Arrimaha dowlad wanaaga iyo hufnaanta ayaa ka mid ahaa arrimihii uu goobta ka soo jeediyay. Socdaaladii uu ku tagey Somaliland iyo wixii uu ku soo arkey ayuu sidoo kale kulanka la wadaagey isagoo si cilmiyaysan u soo bandhigay waxyaabaha togan iyo waxyaabaha taban ee soo arkey.
Maxame Haaruun oo ah baadhe madax banaan ayaa isna si faahfaahsan uga hadlay qadiyada ictiraafka iyo duruufaha ku xeeran iyo in loo baahanyahay ka fekerka abuurid istaraatajiyad cusub oo la jaan qaadi karta wakhtiga hadda lagu jiro iyo in loo baahanyahay kasbashada beesha caalamka iyo sidii ay Somaliland ku heli lahayd saaxiibo qadiyadeeda u hadla.
Jama Muuse Jama oo kulanka SSE uga yimid Somaliland isla markaana agaasime ah Red sea online ayaa sharaxaad ka bixiyay dhaqanka iyo doorka uu ku leeyahay horumarka ummada. Si gaara ayuu u soo qaatay hawlaha bandhiga dhaqanka ee uu waddankii ka wado sida (Hargeysa Book Fair) oo hadda isu bedalay munaasabad caalami ah oo lagau soo casuumu dad badan oo ku hadla luqada Soomaaliga. Ugu dambeyntii Jaamac wuxuu ka hadlay sida ay mahuraan u tahay horumarinta dhaqanka si loo xoojiyo jiritaanka ummada.
Prof. Marja Tiilikainen oo ka socota Jaamacada Helsinki ayaa ka hadashay arrimaha mustaqbalka dhalinyarada iyo sida loogu baahanyahay in loogu hawl galo arrimha ku xeeran ee la xidhiidha dhinacyada shaqada, waxbarashada, caafimaadka iwm. Waxay shirka la qaybsatay sheekooyin naxdin leh oo la xidhiidha dhalinta naftooda khatarta u soo galaya arrimaha tahriibka oo qaar badan oo ka mid ahi ay ku geeriyoodaan inta aanay soo gaahdin halkii ay ku soo socdeen.
Arrimaha kale ee shirka laga hadlay waxaa ka mid ahaa doorka haweenka, ka qurbo ooga, arrimaha dimuqraadiyada, waxbarashada iyo caqabadaha ka taagan, xidhiidhka dhaqan ee u dhaxeeya Finland iyo Somaliland, waxaana arrimahan si ay xirfadi ku jito shirka ula qaybsaday: Mia Nuikka, Dr. Kimmo Kiljunen, Mohamed Maigag, Lea Kuusillehto-Awale, Maija Kajava, Fadumo Bile, Seppo Lehtinen iyo Roda Hassan.
Kulankan waxa lagu soo gunaanaday dood aad u xiiso badan oo ay ka qayb qaateen Tuula Heima, Fadumo Said, Gudoomiyaha adaryeeelka xisbiga cadaalada iyo UCID.Faysal Ali Warabe iyo Prof. Ahmed Ismail Samatar, waxaana laga doodayay xoojinta dimuqraadiyada Somaliland.
Maalintii hore ee kulanku waxay ku dhammaatay guul iyo kala war qaadasho wacan, waxaana lagu soo gabogabeeya mahadnaqa loo soo jeediyay jaaliyada Somaliland ee Finland (Somaliland Seura) oo dhabarka u ridatay qabanqaabada kulanka.
Xooghayaha Dallada SSE